Runyerekupe rweApple Watch Series 6 yeMing-Chi Kuo | Ndinobva mac
Runyerekupe rweMing-Chi Kuo's Apple Watch Series 6
Uye ndezvekuti isu tave kusvika kumagumo egore uye zvese runyerekupe, kudonha, nezvimwe zvinotarisana zvakananga ne2020. Mune idzi runyerekupe, runyerekupe rwaMing-Chi Kuo harugone kushayikwa, zviripachena. kune inotevera Apple Watch modhi.
El Nhepfenyuro dzeApple 6 Sekureva kwaKoo uye chirevo chake mukambani yekudyara TF International Securities, ichave nekumhanyisa kwekushanda kusati kwamboonekwa mune idzi Apple Watch, nani mvura kuramba uye zvine musoro kugadzirisa mukumhanyisa kwayo LTE uye Wi-Fi yekubatanidza machipisi.
Iwe uchave uchikwanisa kudhiza neApple Watch?
Chokwadi ndechekuti parizvino kuramba kwemvura kweApple Watch kwakaringana vashandisi vazhinji uye nekuramba kwazvino isu tese tinogona kuita zviitiko zvakajairika mudziva, kumahombekombe, nezvimwe ... Chii chinoitika ndechekuti Apple inopa zano pamusoro pekupa zvinokanganisa iyo yakasimba mvura kune wachi kana kudhiraivha nayo pairi, chimwe chinhu chinogona kuvandudzwa mune inotevera vhezheni ye smartwatch. Ichokwadi zvakare kuti sarudzo iyi chinhu chinobatsira munhu wese sezvo ichibvumira kuva nechivimbo chakanyanya kana uchipinda mumvura, asi havazi vese vanozoshandisa.
Kune rimwe divi, isu tinogona kuve nekuvandudzwa mukati meApple wachi uye mahwendefa matsva emukati angave asingagadzike muchizvarwa chinotevera, saka zvinokanganisa pane wachi yekutarisa zvinogona kukanganisa mudziyo zvishoma. Chii chiri pachena ndechekuti iyo Series 6 skrini inofanira kunge iine micro-LED tekinoroji Sezvo makuhwa anga achizivisa kwenguva yakareba, pamwe nekuvandudzwa uku dhizaini ichabatsirika, pamwe mukukora kushoma pasina kurasikirwa nehunhu.
Pane nzira refu yekuenda kunoona wachi pamusika saka ngatitorei kureruka pane aya makuhwa eKuu ekuti kunyangwe vangave vakarurama, vanogona kuchinja mumazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Runyerekupe rweMing-Chi Kuo's Apple Watch Series 6
Apple mapepanhau anogona kuve kiyi kune 16 "MacBook Pro
Pfungwa yekuti macOS 11 Ventura inofanirwa kunge iri sei